Diyaarado Kenya iyo Qadar ka socoda oo goor dhow qaadaya 35 dhaawacyo ah.+(SAWIRO) | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Diyaarado Kenya iyo Qadar ka socoda oo goor dhow qaadaya 35 dhaawacyo...
Diyaarado Kenya iyo Qadar ka socoda oo goor dhow qaadaya 35 dhaawacyo ah.+(SAWIRO)
Muqdisho(SONNA) Waxaa weli magaalada Muqdisho ka soconaya howlaha gurmadka ah oo loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay qarixii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho,iyadoo ay jiraan diyaarado khaas ah oo loo soo diray dhaawacyadaasi in ay dibadda u qaadaan.
Waxaa goordhow soo caga dhigtay ilaa 3 diyaaradood oo ka socoda wadamada Kenya iyo Qadar,kuwaasi oo keeney gar gaar dawooyin ah oo loogu talagalay dhaawacyadaasi, sidoo kale waxaa ay qaadayaan dhaawacyada.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Dalka Kenya ayaa sheegtay in 2 diyaaradood oo gar gaar dawo ah oo dhan 31 Tone sida ay soo direen islamarkanaa ay qaadidoonaan dhaawacyo.
Ilaa 35 kamid ah dadkii ku dhaawacmay qarixii Soobe ayaa goor dhow la qaadidoonaan kuwaasi oo la geynayay wadamada Kenya iyo Suudaan.
Dalka Kenya waxaa loo qaadaya 12 kamid ah dhaawacyadaasi halka 23 kalena ay qaadayso Dowladda Qadar kuwaasi oo lagu daweyn doono wadanka Suudaan,iyadoo dhaqaalaha ku baxaya ay dhiibayso Dowladda Qadar.
Wadamada Caalamka ayaa gurmad ballaaran u fidinaya Soomaaliya,iyadoo tan iyo markii qarax uu dhawac ay isu soo tarayeen taageerada Caalamiga ah ee dhinaca gar gaarka,dowladda Soomaaliya ayaa uga mahadcelisay wadamada gar gaarka la soo gaarey Soomaaliya.
Previous articleDowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed oo iska kaashaday nadiifinta Burburka uu reebay Qaraxii Zoobe “Sawirro”
Next articleGuddiga Taakuleynta Ciidamada Qaranka oo Deeq lacageed ku warreejiyey Guddiga Gurmadka Qaranka “Sawirro”